Kuwa kale - Absolut Viajes | Safarka Absolut (Bogga 2)
Sri Lanka, oo loo yaqaanno Ilmada Hindiya, waxay ku siineysaa muuqaal qurux badan, xeebo qurux badan iyo taallo qadiimi ah.
Magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub waxay ku siinayaan taariikh badan, taallooyin aan caadi ahayn oo lagu arko iyo jardiinooyin qurux badan oo lagu raaxeysto.
Maxay tahay inaad eegto si aad u kireysato guri miyi oo leh dammaanad
Ma ogtahay waxa ay tahay inaad eegto si aad u kireysato guri miyi oo leh dammaanad? Halkan waxaan ku siineynaa qaar ka mid ah talooyinka waaweyn ee ay tahay inaad raacdo kiisaskan.
Maraakiibta badda ee Mediterranean-ka ayaa kuu oggolaanaya inaad barato magaalooyinka waaweyn ee koonfurta Yurub iyaga oo leh dhammaan waxyaalahoodii cajiibka ahaa ee qadiimiga iyo taariikhiga ahaa.
Haddii aad la yaabban tahay waxa laga sameeyo Maldives, waxaan kuu sheegi doonnaa inay leedahay taalooyin iyo gastronomy kala duwan, laakiin ka sarreeya dhammaan quruxda dabiiciga ah ee cajiibka ah.
Maxaa lagu arkaa Lapland
Haddii aad la yaaban tahay waxa lagu arko Lapland, waxaan kuu sheegi doonnaa inaad leedahay nalalka woqooyi ee cajiibka ah, laakiin sidoo kale waxaad ku riyoodaa muuqaallo iyo xitaa guriga Santa.
Miyaad ka fekereysaa safaradaas dalxiiska ee bisha Malabka? Hagaag hada waad sidoo kale abaabuli kartaa taada. Halkan waxaan kuugu sheegeynaa sida iyo dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah.
Bali oo ku taal Indonesia
Safarka Bali ee Indooniisiya waa in la ogaado adduun aad uga duwan kuweenna. Laakiin sidoo kale booqo meel dabiici u qurux badan iyo taalooyin u gaar ah.
Baaruudda Belguim waxay leedahay xarun taariikhi ah oo taariikhi ah oo ah Taariikhi Taariikheed isla markaana leh dhismayaal u gaar ah adduunka.
Helsinki waa magaalo ay ka buuxdo taariikh, taallooyin iyo matxafyo. Laakiin sidoo kale iyada oo leh gastronomy dhadhan fiican leh intaad filayso.
Krakow waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub. Waxaad ka heli doontaa dhaxal dhaxal gal ah, gastronomy aad u fiican iyo dad soo dhoweyn leh.
Oo maxaan ku sameeyaa duulimaadkayga? Dhibaatada adduunka
Imaatinka fayraska loo yaqaan 'coronavirus' ee goobta ka dhacay ayaa meeraha oo dhan wada rogay. Wadamada qaar way gudbeen ama waxay dhexgaleen ...
In kasta oo xaqiiqda ay tahay in diyaaraddu ay weli tahay tan ugu badan ee gaadiidka ay adeegsadaan inta badan dadka, ...
Hoteellada lala raaco carruurta
Ma taqaanaa dhammaan astaamaha iyo waxa hudheeladu ka wadaagaan carruurta? Halkan waxaan ku tusaynaa inaad ku qaadanaysid fasaxyada qoyska ugu fiican
Waxaa jira astaamo badan oo hudheelo aan carruur lahayn oo ay tahay inaad ogaato. Ma rabtaa inaad ku raaxeysatid meel aad kaligaa tagto adigoo labo ah ama saaxiibbo la ah?
Raadi makhaayad leh bogagga Jaallaha ah
Bogagga Huruudda ah ayaa weli ah tixraaca gobolka ee loogu talagalay martigelinta iyo xirfadleyda nooc kasta ha ahaadeene, oo ka socda dhakhaatiirta ilkaha ...
Maxaad raadineysaa inaad kireysato darawal?
Haddii aad rabto inaad kireysato darawal waa inaad tixgelisaa taxane taxane ah, si wax waliba si habsami leh ugu socdaan oo aad ku raaxeysan karto fasaxaaga.
Meelo jaban oo loogu safro Yurub
Miyaad ka fikireysaa inaad fasax aado oo aadan rabin inaad wax badan ku bixiso? Qor meelahaan raqiiska ah ee loogu safro Yurub kuna raaxeysto nasashadaada.
Ma dooneysaa inaad safarto oo ma garanaysid meesha aad shandada ka bilaabeysid? Fiiri xirmooyinka badbaadada ee safarkaaga oo ha ku dhaafin guriga waxba.
Beerta Qaranka ee Komodo
Duurjoogta oo aan la magacaabin, Beerta Qaranka ee Komodo ee Indonesia waa janno caan ku ah joogitaanka ugxanta adduunka ugu weyn.
Waa inaad iska ilaalisaa in lagu khiyaaneeyo marka aad kiraysanayso guri fasaxaaga xagaaga ah. Sidaa darteed, wax la mid ahi ma aha inaad raacdo taxane ah talooyin fudud oo aan soo jeedinno
Ku safridda diyaaradda carruurta waxay noqon kartaa mid ka dhib badan sidii aan u maleyn lahayn. Laakiin waxaan had iyo jeer dhaqan gelin karnaa taxane talooyin aasaasi ah.
Waa maxay fuulitaanka sariirta
Couchsurfing wuxuu noqday mid ka mid ah siyaabaha ugu faa'iidada badan ee lagu safro. Raadi waxa ay tahay iyo sida ay u shaqeyso marka lagu daro faa iidooyinkiisa waaweyn.
Abaabulka fasax qoysku had iyo jeer ma sahlana. Sidaa awgeed, waxaan soo bandhigeynaa tallaabooyin taxane ah oo aan qaadayno. Fudud oo ficil ah!
Harada Dhiigga: Booqashada cirfiidka Slovenia
Haddii aad booqato Lake Bled ee Slovenia waxaad ka heli doontaa adduun sixir iyo dabiici ah oo u qalma sheekada ugu fiican Yurub.
Caymiska safarka qoys ahaan, raaxada nasashadaada
Caymiska safarka qoysku had iyo jeer waa ikhtiyaar wanaagsan. Waxaan heli doonnaa degganaan maskaxeed iyada oo ay ugu wacan tahay faa'iidooyinkeeda qaabka caymiska.
Maxaa lagu arkaa Victoria Falls
Haddii aad raadineyso inaad naftaada ku weydo mid ka mid ah waxyaabaha yaabka leh ee dabiiciga ah ee adduunka, Victoria Falls ayaa noqotay daah-furkii ugu xiisaha badnaa.
Booqashada macbudyada Angkor ee Kamboodiya
Booqashada macbudyada Angkor ee Cambodia waxay ka dhigan tahay inaad gasho mid ka mid ah dhismooyinka ugu muhiimsan adduunka. Baro iyaga!
Maxaa lagu arkaa Sofia
Haddii aad la yaaban tahay waxa lagu arko Sofia, waxaan kuu soo qaadaneynaa geeso taxane ah iyo aagag muhiim ah oo ay tahay inaad ku booqato socdaalkan wax ka badan safarka lama ilaawaanka ah.
Goobaha loogu talagalay baxsiga jacaylka
Waxaa jira meela badan oo loogu talagalay baxsi jacayl oo aan ka dooran karno. Waxaan dooranay kuwa aad ku booqan karto si deg deg ah.
Faa'iidooyinka ballanta safarka ka hor
Faa'iidooyin dhawr ayaa ku jira inaad ballansato safar hore oo ay tahay inaad ogaato. Waxaad arki doontaa sida qaabkan aad ugu raaxeysan karto fasaxaaga inbadan.
Ma mudan tahay in la galo caymiska baajinta safarka?
Ma mudan tahay in la shaqaaleeyo caymiska baajinta safarka? Maanta waxaan ku siinaynaa jawaabta waxaanan kuu sheegaynaa waxay ku saabsan tahay iyo caymiska ay leedahay.
Maanta waxaan socod aad u weyn ku dhex maraynaa waxa loogu yeero 'Gabadhii Mossa' ama sida ugu wanaagsan loo yaqaan 'Dinant'. Soo ogow waxaad ku aragto Cunto, Belgium, iyo geesaheeda quruxda badan.
Maxaa lagu arkaa Warsaw
Ha moogaanin socodkan waxa lagu arki doono Warsaw. Waxaad ku raaxeysan doontaa geesahaas sixirka ah, ee kuu qaadaya taariikhdeeda iyo dhaqankeeda.
Dhismooyinka Petronas ee Kuala Lumpur ma aha oo kaliya mid ka mid ah astaamaha waaweyn ee Malaysia laakiin guusha Aasiya ee ay taageerto dhaqanka iyo hal-abuurnimada.
Laga soo bilaabo fadhiga spa si aad ugu lumiso magaalooyin qurux badan, qorshayaashan usbuuca dhammaadkiisa sida lamaanaha ayaa kugu guuleysan doona. Dhamaantood ma wada sameysay?
Xeebaha ugu fiican Thailand
Xullo xeebeedyada ugufiican Thailand, halkaas oo aad ku qaadan doontid maalmaha iyo habeennada ugufiican ee aad joogto. Dalab ballaaran oo loogu talagalay dhammaan dhadhanka.
Raadi halka aad u safreyso Oktoobar. Meelo fiican, oo leh heerkul wanaagsan iyo waxyaabo badan oo la ogaado. Laba jeer ha fikirin!
Geedaha qumbaha, beeraha bariiska ee ballaaran ama tuulooyinka sabeynaya waxay ku sugayaan Mekong Delta oo kiciya sixirka iyo qalaad ee Vietnam. Ma rabtaa inaad ogaato?
Duulimaadyada aan la raacin, sidee u shaqeeyaan?
Waxaan soo bandhigeynaa faa iidooyinka duulimaadyada aan duulimaadka aheyn, isla mar ahaantaana aan kuu sheegeyno sida ay u shaqeeyaan iyo meesha aad ka heli karto gorgortan oo kale.
Sida loo helo shatiga wadista caalamiga ah
Haddii aad ka fekereyso sida loo helo shatiga wadista caalamiga ah, waxaan ku tusineynaa talaabooyinka ay tahay inaad qaado, iyo sidoo kale dukumiintiyada iyo qiimahooda.
Ciyaarta Khariidadaha Carshiga
Waxaan dib u eegeynaa meelaha ugu muhiimsan Game of Thrones. Meelo gaar ah oo aan ku aragnay taxanaha oo dhan.
Sidee loo cusbooneysiiyaa baasaboorka
Soo ogow wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato sida loo cusbooneysiiyo baasaboorkaaga. Meesha laga sameynayo, dukumiintiyada la soo bandhigayo iyo qiimaha la bixinayo.
Qasriga Bran ama Daarta Dracula waa mid ka mid ah joogsiyada qasabka ah ee Romania. Meel soo jiidasho iyo halyeeyo badan ka dambeeya.
Ha ka maqnaan xulashadan meelaha aad u safreyso bisha Sebtembar taas oo kaa yaabin doonta. Waxaad ogaan doontaa meelo gaar ah oo aad ku raaxeysato bishaas!
Sababaha loo safro shandado la’aan
Ku safridda shandado la'aantu waxay noqotay fikrad aad u fiican. Haddii aadan wali ku qancin, ogow faa'iidooyinkeeda iyo sababaha safarka raaxada leh.
Haddii aad rabto inaad ogaato halka laga arko Nalalka Waqooyiga, waxaan kuu deyneynaa qodobbada ugu wanaagsan ee aad ku raaxeysan karto ifafaalehan quruxda badan ee dabiiciga ah.
Macbudyada Ayutthaya waxay ka mid yihiin safarada muhiimka ah ee lagu raaxeysto Beerta Taariikhda oo ay ka buuxaan macbudyo, qasriyo iyo farshaxanno ifiya oo la xiriira waqtiyo kale. Haddii aad qorsheyneyso inaad booqato Thailand, markaa ma iloobi kartid meeshan.
Haddii aad u safartid dibadda: SIM wareegaya ama lacag horudhac ah oo laga helay waddanka aad booqatay?
Malaha waa su’aal shaki badan dhalisa. Labadaba wareega ama SIM-ka lacag bixinta ah waa laba ikhtiyaar markaad safar aadayso iyo inaad ku xirnaan karto internetka. Maanta waxaan ogaaneynaa midka ugu fiican iyo kan ugu liita labada ikhtiyaarba si aad go'aan uga gaartid midka ugu raqiisan iyo midka adiga kugu habboon.
Araajida iyo agabyada aan ka maqnaan karin moobilkaaga marka aad safar aadayso
Waxaan dib u eegeynaa barnaamijyada iyo agabyada moobiilku u baahan yahay markaan safar galno. Dariiq loo qaado wax kasta oo aad u baahan tahay si taxaddar la'aan ah, oo waxaan ku raaxeysan karnaa maalmahaas nasashada mudan. Raadi waxaad u baahan tahay inaad ku sameyso!
Haddii safarkaaga xiga uu yahay Jasiiradaha Fiji, waxaan ku siin doonnaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si safarkaas uga dhigo wax aan la ilaawi karin. Laga soo bilaabo wixii laga qaban lahaa jasiiraddan, qiimaha iyo xogtaas xiisaha leh ee aan aadka ugu baahan nahay. Ma xirxireynaa?
Tanna, oo ah jasiiradda la yaabka leh ee ku taal Badweynta Baasifigga
Tanna waxay ku taal Badweynta Baasifigga. Waa mid ka mid ah jasiirado badan oo ka kooban jasiiradaha Vanuatu. Laakiin shaki la'aan, waxay leedahay waxyaabo waaweyn oo la ogaado. Waxay ku saabsan tahay jasiiradda la yaabka leh ee Jules Verne noo sheegay waqtigaas. Ma rabtaa inaad gasho?
Maxaan soo qaadan karaa shandadaha gacanta?
Marka aynaan rabin inaynu safaf dhaadheer sugno si aynnu u soo hubsanno, shandadaha gacanta ayaa noo noqonaya saaxiibkeen ugu fiican. Laakiin haa, waa inaan markasta nafteena sifiican ugu wargalino waxa aan qaadi karno iyo wixii aan qaadi karin. Marka, maanta waxaan nadiifineynaa dhammaan shakigaas madaxaaga ku habsaday.
Waxaan ku tusineynaa qaar ka mid ah xeebaha ugu fiican adduunka halkaasoo aad ka ogaan karto deegaanno gaar ah oo sixir ah, oo ay ku hareereysan yihiin dabeecadda iyo dabcan, qurux badan. Ma ku jirtay mid ka mid ah kuwa aan soo sheegnay? Waxay mudan yihiin in loo riyaaqo hal mar noloshooda.
Waxaan ku dhex lugeyneynaa mid ka mid ah lamadegaanka ugu caansan shaashadda weyn. Wadi Rum wuxuu ahaa aasaaska filimada sida "Lawrence of Arabia" wuxuuna qarinayaa waxyaalo badan oo qarsoon iyo xiiso badan oo mudan in la noolaado, hal mar noloshiisa.
Safar bilaash ah tabaruc ahaan
Raadi sida aad ugu safri karto bilaash ahaan tabaruc ahaan adduunka oo dhan. Khibrad aad kuu kobcinaysa adiga iyo mustaqbalkaaga.
Discover Leuven: isku dhafka dhaqanka, dhaqanka iyo nolosha badan. Nooks iyo taalooyin qurux badan ka buuxdo oo aad ku arki karto safar.
Maxaa lagu arkaa Bratislava
Ha seegin waxa aad ku arki karto Bratislava. Caasimada Slovakia waxay leedahay geeso badan oo lagu muujiyo halka farshaxanku kula kulmo halyeeyga iyo taariikhda.
Sida aduunka looga abaabulo
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo abaabulo safarka adduunka oo dhan, ha moogaanin tabaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay diyaargarowga aan maanta kaaga tagnay.
Waxaan kuu daynay tilmaamaha ugufiican ee safarka raqiis ah. Tallaabooyin yaryar oo lagu xisaabtamo haddii aan rabno inaan keydinno wax ka badan inta aan malayn karno.
Maxaa lagu arkaa Malta
Ha seegin waxa aad ku arki lahayd Malta. Dalxiis jasiiraddiisa waaweyn, iyo sidoo kale magaalooyinkeeda oo ay ka buuxaan hanti-dhismeedyo iyo dhaqammo waaweyn
Tilmaamaha Boorsada ee Thailand
Haddii aad u safreyso boorsada boorsada ee Thailand ha moogaan hageheena halka aan ku barinayno waxa la keeno, sida loo safro, sarrifka lacagaha iyo tabaha kale
Jasiiradda Sal, oo ku taal Cape Verde: dhaqanka No Stress
Jasiiradda Sal, ee ku taal Cape Verde, waa janno ay maydhaan mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan Afrika, ayna ku nool yihiin dad diirran oo martigelinaya.
Farqiga u dhexeeya hudheelada magaalooyinka iyo miyiga
Kuwa aan aqoon waxa dalxiiska miyiga inta badan la yaaban yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin hoyga miyiga ...